LG သည် ၅'၈ လက်မ Phablet ကိုမကြာမီတွင်ရောင်းချမည် Androidsis
LG သည် ၅.၈ လက်မ Phablet ကိုမကြာမီတွင်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Alexis Martinez | | LG
တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်အကြီးဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် LG ၆ လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိတဲ့ Phablet ကိုစတင်မိတ်ဆက်တော့မှာပါ၎င်းသည် Samsung Galaxy Note ကဲ့သို့သောပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
LG G4 သည်ယခုနှစ်နှင့်ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းအထိမျှော်မှန်းထားသည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သော်လည်းအနာဂတ်တွင်ကုမ္ပဏီကလုပ်ဆောင်နေသည့် Phablet သည်နိုင်ငံစုံ၏အထင်ကရဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်း၏အဓိကထင်ဟပ်မှုကိုပယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ FCC စာရွက်စာတမ်းများတွင်အနာဂတ် terminal ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်၎င်း၏ကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့ရသည်။ LG LS770.
ငါတို့စျေးကွက်တွင် ၀ င်ရောက်နေသော Phablets ဘုရင်သည် Note range ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဤ terminal သည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီးပြိုင်ဘက်ကင်းသောပုံရသည်။ နောင်တွင် LG phablet နှင့်အတူလာမည့်အနာဂတ်တွင်အလွယ်တကူဖြန့်ချိနိုင်သည့် LG phablet သည်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ LG G4 သည်အခြားစစ်ထုတ်ထားသောပုံအချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်.
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ Phablet အသစ်နှင့် FCC စာရွက်စာတမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များအရသိရသည် အကျယ် ၇၉.၃ မီလီမီတာနှင့် ၁၅၄.၁ မီလီမီတာအကျယ် ၅.၈ လက်မမျက်နှာပြင်။ သူ့ရဲ့အများဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Note4နဲ့အရွယ်အစားနဲ့ဆင်တူတဲ့အရွယ်အစားကတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးဒီပစ္စည်းဟာအထဲမှာပါလိမ့်မယ် 1 GHz quad-core ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM2GB နှင့်သိုလှောင်မှု 1 GB ရှိသည်ဤနောက်ဆုံးအချက်နှစ်ချက်သည်အခြားသောထုတ်လုပ်သူများ၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော Galaxy Note3ရှိသည့်4GB RAM ကဲ့သို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အကြောင်းပြောရင်အနာဂတ် terminal ရှိလိမ့်မယ် ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီ။ FCC စာရွက်စာတမ်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစူးစိုက်နေသောအရာတစ်ခုခုကိုဤအချိန်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤစာတမ်းများတွင်ဖုန်းကို embedded battery မပါဘဲရောင်းချမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအနာဂတ်ကိရိယာတွင်ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်မရှိပါ ဘက်ထရီပိုမိုမြင့်မားစွမ်းရည်နှင့်အတူအခြားဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ကင်မရာများအပိုင်းတွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားပါမည် အနောက်ကင်မရာအတွက် Megapixels 8 နှင့်ရှေ့ကင်မရာအတွက်5MP။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤရှုထောင့်များ၏ကိရိယာများတွင်အသုံးများသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် Stylus တစ်မျိုးကိုဖော်ပြသည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်အနည်းဆုံးခဏကြာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ခမ်းပေါ်၌ပျားရည်ဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G4 အကြောင်းပိုမိုသိရှိလို။ ယခုလူအများပြသရန်အခြားကြီးမားသော terminal တစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းနှင့်တွဲဖက်ရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အနည်းငယ်ကြာကြာစောင့်ရပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG သည် ၅.၈ လက်မ Phablet ကိုမကြာမီတွင်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Android 5.1 သည် Nexus6စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်
The Neighborhood Derby သည် Hay Day အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်လာသည်